दु र्घटनाले गाउँ नै रित्तियो, शोकमा डुब्यो पुरै कार्की गाउँ, छोरीहरु किरिया बस्दै ! – PathivaraOnline
Home > समाज > दु र्घटनाले गाउँ नै रित्तियो, शोकमा डुब्यो पुरै कार्की गाउँ, छोरीहरु किरिया बस्दै !
admin December 7, 2019 समाज	0
टोपलाल अर्याल, गुल्मी । उमा कार्कीका आँखा ओभाएका छैन् । मंलबार घरमुलीसहित तीन जना दु र्घटनामा परे । कुल पु’जाका लागि बाग्लुङ्ग निसीखोला हिडेका श्रीमान धन बहादुर कार्कीको श व बुधबार मात्रै फेला पर्यो । दु र्घटना स्थलमा बुहारी सुचना कार्की मृ त थिइन् । घाइते अवस्थामा फेला परेका नाति चार बर्षीय हिमाल कार्की काठमाण्डौमा उपचारत छन् । सोहि गाउँका तिल बहादुर कार्कीले दु र्घटनाको अघिल्लो रात सम्झिएर आँखामा आँसु भरे ।
त्यो दिन उनले श्रीमति भुमि कार्कीलाई नजान आग्रह गरेका थिए । ‘म बि’रामी छु आगामी कुल पुजामा मर्ने बाँ’च्ने ठेगान छैन, मै जान्छु तिमी फेरि जाउली भनेको हो ’उनले भने,‘मर्ने लेखा रहेछ, कहिल्यै गएकी छैन भन्दै गइन् ।’ १६ बर्षिय छोरा बिष्णु कार्की आमाको क्रि’या बसेका छन् ।बल्लबल्ल अ’डिएको कच्ची घर । त्यहि झुप्रोमा सिता कार्कीको तीन आमाछोरी थिए । मंगलबार दुई बर्षीया छोरी अनुष्कासहित कुल पुजामा हिडे। तर साँझ आमाछोरी नै घरमा आएनन।
नेपाली उखान ‘जहाँ होचो त्यहिँ घोचो’ भने जस्तै त्यति परिवारमा ठूलो ब ज्रपात पर्यो । १६ बर्षीया छोरी इशा र १० बर्षीया पुजा मात्रै घरमा छन् । बुवा प्रेम कार्की मजदुरीको लागि भारतमा छन् ।दु’र्घटनाको खबर सोहि दिननै थाहा पाए । खुसी बोकेर फर्किने परदेशी पीडा लिएर घर आउँदै छन् । संभवत दुई छोरी मध्ये इशा तीन दिनबाट क्रिया बस्ने छिमेक बद्री कार्कीले बताए ।धन बहादुर कार्की दुई छोरीसहित दु र्घटनामा परे । मिना रहिनन् । निमा केसी गम्भीर घाइते छन् ।
बाग्लुङ्गको भिमगिठेबाट चढेकी बहिनी लक्ष्मी केसी पनि दुई मिनेटमै दु’र्घटनामा परिन् ।‘मन अ’ड्याउने कुनै ठाउँ बाँकी रहेन,बुबासंगै दिदि बहिनीहरु गुमे, क्रियामा बसेका धन बहादुरका छोरा थम्मन कार्कीले भने,‘गाउँनै रित्तो भएको छ ।’ १२ घर कार्की भएको गाउँमा दुःख नपरेको घर छैन् । घरको पीढिँमा टु’सुक्क । चिसो सिरेठो छेक्न ठूलो बलाङकेट । आँगनमा बसेका सवै शो’कमा थिए । मंगलबार दु र्घटनामा मिना बस्नेतको ज्यान गयो ।
छोरा १३ बर्षीया सुनिल क्रिया बसेका छन्।सुनिलको अनुहारमा आमा थिइन । बोल्न रुचाएनन् । बुबा चन्द्रदिप बस्नेत रोजगारी कै शिलसिलामा साउदी छन । परिक्षा राम्रो गर्न भन्दै हिडेकी फर्किएर नआएपछि सुनिल र उनकी बहिनी रबिना बस्नेत पीडामा छन् ।धन बहादुर कार्की पहिलो पटक कार्की दाजुभाई खोज्दै कुल पुजाको लागि इस्मा आएका थिए । तर दाजु भाईसंगको भेट अन्तिम मात्रै रह्यो । जे उदेश्य बोकेर आए, त्यो पुरा भएन ।दु’र्घटनामा परेर ज्या’न गुमाए ।
दाजु भाईसंगको कुल पुजाको खुसी बोकेर घर फर्किन पाएनन् । महेन्द्र कार्की पनि २० बर्षमा कुल पुजाकै लागि भारतबाट आए । कुल पु’जा कै लागि दशै र तिहारमा समेत घर आएनन् । दु र्घटनामा परेर ज्या न गुमाए । मृ त्युको खबरले भारतमै छोडेर आएका दुई छोरा र श्रीमति आँसु पुछ्दै बाटोमै छन् । कुल पुजाको लागि मंगलबार बिहान घरबाट २४ जना जीपमा हिडे ।पहिलो प्रहरीचौकी पौदी अमराई हो ।त्यो गाडी चे’किङ्ग पौदी अमराई प्रहरीको चेकिङ्गमा परेन् ।
बाग्लुङको खार बजार पुगेसी प्रहरीले ओभरलोड देखे । गाडी रोकेर आठ जनालाई झारे । झर्ने मध्येका विशाल कार्की हुन् । उनकी आमा बसुन्धरा त्यही जीपमा हिडिन । केही बेरमै बसुन्धराको दु र्घटनामा परेर मृ त्यु भयो । भाग्यले छोरा जोगिए । त्यहि चेकजाँचमा मधु कार्की पनि झरे । उनकै दिदी माया जीपमा थिइन । दु र्घटनामा परेर ज्यान गयो । प्रहरीले झार्ने मध्येका नारायण कार्की पनि हुन । उनी झ’रेर बाँचे । उनका दाजु महेन्द्र दु र्घटनामा परे । ‘पहिले प्रहरीले रोके पछि केहि बेर बिबाद पनि भयो, आखिर प्रहरी हाम्रो भगवान रहेछ।’ उनले भने,‘नझारेको भए कसैको परिवारनै सकिन्थ्यो ।’
बाग्लुङ बडिगाड गाउँपालिका ५ र्की ५५ बर्षीया लक्ष्मी केसीको श’व आफन्तले गाउँमै बुझेर दाहसँस्कार गरेको लक्ष्मीका भाई पिताम्बर कार्कीले बताए । लक्ष्मी घरबाट गाडी चढेको दुई मिनेटमै दु र्घटनामा परेकी थिइन। इस्मा गाउँपालिका ४ का गाडी चालक २५ बर्षिय रेशम थापाको श व मंगलबारनै परिवारले बुझेका थिए। उनको निस्ती दोभानमा बुधबार बिहान दाहसँस्कार गरिएको स्थानीय राम बहादुर रेश्मी ले जानकारी दिए । त्यस्तै नवलपरासी वर्दघा ट नगरपालिका २ की ६० बर्षीया मुना कार्कीको श व नवलपरासी लगिएको छ ।
दुनियाँमा कोही कसैको आफ्नो हुँदैन, मानिसहरु मलामी जान्छन् त सिर्फ हाजिर जनाउन !
प्रेमिकालाई प्रयोग गरेर बला त्कारको धन्दा गर्ने असई…